Miyaanaan tolow isku taariikh ahayn?
Thursday July 23, 2020 - 08:21:28 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
Dadka Somaliland intiisa badani 1991kii Waxay isku raaceen la soo noqoshadii madaxbanaanida Somaliland. Walow ay jireen dad fara-ku-tirisa oo go'aankan ka soo horjeestay, kuwaa soo intooda badani markii midawga la ahaa, soo qabtay xilal kala duwan, soona arkay midawga dhibtiisa iyo dheeftiisaba. Illaa iyo haddana masuuliyiintii fikirkaa aaminsanaa, kuwo ka mida ayaa ku maqan Soomaaliya, kuwo kalena Way ka tanaasuleen fikirkoodii,waxaanay ku soo laabteen dalkoodii.
Haddaba Waxa jira dhalinyaro ragg iyo hablaba leh, Kuwaa soo intooda badani ku dhashay ama ku koreyba intay Somaliland jirtay,dhalinyaradani nolosha qaybaheeda kala duwan,waxay ku leeyihiin kaalin muuqata. Kuwo ka mida ayaa Suxufiyiina, kuwo kale waa Abwaano,qorayaal, fannaaniin iyo aqoonyahanno. Dhammaan Dhalinyaradani waxay u ololeeyaan "anoo ku ixtiraamaya fikirkoodaa, waa siday ilbaxnimada dunida ku shaqaysee" fikirka midnimada ah ee ay Somaliya wadato. Waxay ka soo horjeedan Inta badan aragtida ay qabaan bulshada Somaliland, taasoo ah aayo-ka-tashiga iyo inay helaan madaxbanaani dawladeed oo ay iyaku ka taladeeda leeyihiin.